कारबाही र प्रोत्साहनले लोडशेडिङ हट्योः उर्जामन्त्री(अडियोसहित)
कारबाहीको निरन्तर प्रक्रिया एकातिर छ भने प्रोत्साहन पनि सँगसँगै मैले गरेको छु । यसमा काम गर्ने साथीहरुलाई प्रफर्मेन्सका आधारमा जिम्मेवारी दिने, राम्रो काम गर्नेलाईै राम्रो जिम्मेवारी दिने, कम काम गर्नेलाई त्यसै अनुसारको भूमिका दिने गरेको छु । जनताकोबाट लाभ नलिइ प्राधिकरणलाई फाइदामा लिएर उहाँहरुले बढी लाभ लिने, सेवा लिने गरी त्यो कुरा पनि मैले राखेको छु । बिभिन्न योजनामा शेयर राखेर त्यसबाट पनि लाभ लिन पाउने व्यवस्था पनि मैले गरेको छु । एकातिर कारबाही र अर्कोतिर प्रोत्साहनलाई मैले सँगसँगै अघि बढाएको छु । कारबाही त निरन्तर रुपमा गरिराख्नुपर्छ ।
आन्दोलित इन्जिनियर भन्छन्, 'भत्ता मात्रै हाम्रो माग होइन'
२०७२ सालमा गएको भूकम्पमा प्रभावित ३१ जिल्लामध्ये बढि प्रभावित १४ जिल्लाको काम पहिलो चरणमा सुरु भयो । १४ जिल्लामध्ये काठमाडौं उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा खटिएका २५ सय ७१ इन्जिनियर र प्राविधिक अहिले आन्दोलनमा छन् ।
'यसकारकाण गाउँपालीकाको संख्या बढाउन मिल्दैन'
काठमाडौं । दलहरुबीच राज्यको पुनर्संरचनापछि बन्ने स्थानीय निकायको संख्या घटाउन दवाव परेपछि पनुर्संरचना गर्न बनेको आयोगले संख्या बढाउन नसकिने बताएको छ । नागरिकले नजिकबाटै सरकारको महसुस गर्ने गरि अहिलेको संख्या तोकेको र यो संख्या पनि धेरै भएको आयोगको निस्कर्ष छ ।
तोकिएको समयमा चुनाव नभए के हुन्छ ? ( अडियो सहित )
समय घर्कंदै जाँदा पनि दलहरुको सहमति हुन नसक्दा तत्कालै चुनाव हुने छनक देखिएको छैन । संविधानले तोकेको समय भित्र चुनाव नभए के होला ?
४५ दिनमा भूकम्प पीडितले अनुदानको पहिलो किस्ता पाउने
कतिपय अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमा विगतमा रहेका जग्गा सम्बन्धी समस्या जस्तो लालपुर्जा नभएको कारणले विवाद र समस्या बारे केही लाभग्राहीको गुनासो आएको छ । यसकाबीच पनि हामीले तीन लाखभन्दा धेरैसँग सम्झौता गरेका छौं । यसलाई गति दिएर काम गर्दा सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको ४५ दिनको समयावधि भित्रमा पहिलो किस्ता बराबरको पैसा पठाउन सकिन्छ ।
अब बन्ने गठबन्धनमा मधेसी मोर्चाको सहभागिता कस्तो हुँन्छ ? (अडियो सहित )
लिलप्रकाश चन्द July 17, 2016
नयाँ सरकार गठनको बहस र आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनको अनसनको समापन एकै समयमा भयो । मधेसी मोर्चासहितको गठबन्धन सरकारमा जाने चर्चा भए पनि उसले भने माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडान लिएको छ ।
मौद्रिक निति र सर्वसाधारणलाई पार्ने प्रभाव
राष्ट्र बैंकले हिजो मात्रै नयाँ मौद्रिक निति सार्वजनिक गरको छ । कृषि क्षेत्रमा बैंकले गर्नुपर्ने लगानीको मापदण्ड देखि घरजग्गाको लागि आवश्यक कर्जा दरसम्म तोकेको मौद्रिक नितिले सर्वसाधारणलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ? (अडियो सहित)
पञ्च्यातकालदेखिका विस्थापित शिक्षकलाई पुनःबाहाली गरिने
काठमाडौं । राजनीतिक आधारमा कारवाही गरिएका र द्वन्द्वका क्रममा पेशाबाट विस्थापित भएका विद्यालय तहका शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई सरकारले पुनःबहालीको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
कुन ग्रेडले के पढ्ने ? (अडियो सहित)
ग्रेडिङ प्रणालीमा कुल चार ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज (जीपीए) मध्ये विद्यार्थीको प्राप्तांकअनुसार नौ तहमा वर्गीकरण गरेर नतिजा प्रकाशन गरिएको छ ।
पुरुषको कपाल दाह्री मिलाउने एकजना महिलाको कथा
कपाल काट्ने पेशा प्राय ठकुरी जातका पुरुषहरुले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको पाईन्छ । र यो अरुले गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता पनि रहेको छ । तर पश्चिम बागलुङ बुर्तिबाङकी झकमाया पुन मगरले भने यो कुरा पटक्कै मान्नुहुन्न ।
पानीको अभावले महिलाहरूको दिनचर्या अस्तव्यस्त
अबरोधकाबीच संसदबाट चिकित्सा शिक्षा बिधेययक पारित